Yamaha Fino ဆိုင်ကယ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Black ရောင် Yamaha Fino အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာ...
Purple ရောင် Yamaha Fino အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
မြန်မာပြည်ရောက် ရမဟာ ဆိုင်ကယ် များ
ရာမဟာ ဆိုတာ ဂျပန် နိုင်ငံ အခြေဆိုက် ကုမ္မဏီကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သူက စက်ပစ္စည်း အစုံ ထုတ်ပါတယ်။ ရမဟာ ကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက် မှာ ဆိုရင် တေးဂီတ တူရိယာ ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း များ၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ် နဲ့ အားကစား သုံး စက်ပစ္စည်း မျိုးစုံကို ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ အခြားသော ထုတ်ကုန် များစွာလည်း ရှိသေး တာ ကြောင့် သူ့ကို Multinational corporation လုပ်ငန်း အမျိုးအစား လို့လည်း ခေါ် ပါတယ်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ကိုတော့ Yamaha Motors Company အမည် အောက် ကနေ ထုတ်လုပ် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရမဟာ က ဆိုင်ကယ်တွေ မြန်မာပြည် ရောက် ပေမယ့် အရေအတွက် နည်းပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ ဈေးကြီး တာလဲ ပါသလို ရှားတာလည်း ပါဝင် ပါတယ်။ သူက ဂျပန် နိုင်ငံ ကနေ လည်း ဝင် သလို ထိုင်း နိုင်ငံ စက်ရုံ ကနေ လည်း ဝင်ရောက် ပါသေး တယ်။ မြန်မာ ပြည် အရောက် အပေါက် များတဲ့ ရမဟာ ဆိုင်ကယ် အနည်းငယ် ကိုပဲ ရွေးချယ် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
မြန်မာပြည် ရောက် လူသိများ ရာမဟာ ဆိုင်ကယ် အချို့
ရာမဟာ XS စီးရီး ဆိုင်ကယ် များ ခေတစ်ား ပါတယ်။ သူက လမ်းသရဲ ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစား ထဲက ဖြစ်ပြီး အသစ် ဆိုရင် ၁၀ သိန်း အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ FZ, YBR တို့ ဆိုရင် ဈေးပို သက်သာ သလို အရွယ်လည်း သေးသွား ပါတယ်။ နာမည်ကြီး တာ ကတော့ XS1 နဲ့ XS2 တို့လို ဆိုင်ကယ်တွေ နာမည်ကြီး ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၆၅၀ စီစီ ဝန်းကျင် မှာ ရှိပြီး အင်ဂျင် တည်ဆောက် ပုံက သာမန် အခြား ဆိုင်ကယ် များနဲ့ မတူပါဘူး။ အကြောင်း ကတော့ သူဟာ အားပိုကြီးပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမြင့်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေ အား ထုတ်လုပ် မှု ကလည်း အနည်းဆုံး bhp 125 မှာ ရှိပါတယ်။ ရာမဟာ မှာ နောက်ထပ် နာမည်ကြီးတာ ကတော့ ဖီနို တို့လို ဆိုင်ကယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဟွန်ဒါ စူပါကပ် ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်ပြီး ဟွန်ဒါ နဲ့ စာရင် ရာမဟာ ကို ပိုမို လူကြိုက်များ ကြ ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဈေးက ပိုကြီး နေတော့ စူပါကပ် ဘက် ကိုပဲ ပို အဝယ် များ ကြ ပါတယ်။ အကြောင်း ကတေ့ ဖီနို ၂၀၁၀ မော်ဒယ် ဝန်ျးကင် တစ်ပတ်ရစ် တောင် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း ဝန်းကျင် တန်ဖိုး ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရာမဟာ အခြား ဆိုင်ကယ် များ နှင့် မြန်မာပြည် ဈေးကွက်
ရာမဟာ ကနေ ပြိုင်ဆိုင်ကယ် များလည်း မြန်မာပြည် ဝင်ပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ဈေးအတော်ကြီးသွား ပါပြီ။ သိန်း ၃၀၊ ၃၀ ကနေ ရာဂဏန်း လောက် အထိ အစားစား ရှိပါတယ်။ နယ်ဘက်က အချို့သော ငွေရှိ လူငယ် များဟာ ရာမဟာ ပြိုင်ဆိုင်ကယ် ကို ခရေဇီ ဖြစ်ကြပြီး မှာယူ ကြပါတယ်။ အများစု ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်က နေ အများစု ဝင်ရောက် ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြဝတီ ကနေ ဝင်တာ တွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဂျပန် ကနေ တိုက်ရိုက် မှာတာ တွေကတော့ ရှားပါတယ်။ နယ်စပ် ကနေ အသစ်လည်း ဝင် သလို တစ်ပတ်ရစ် များလည်း ဝင်ပါ သေးတယ်။ Motors.com.mm ကနေလည်း ရာမဟာ ဆိုင်ကယ် သစ် ဆိုင်ကယ် ဟောင်း မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Yamaha မော်ဒယ်
Yamaha Grand Filarno